Pale Moon 31 dia efa navoaka, fantaro ny vaovao | ubunlog
Pale Moon 31 dia efa navoaka, fantaro ny vaovao
Darkcrizt | 10/05/2022 21:47 | Nohavaozina amin'ny 12/05/2022 22:05 | Software
Nanambara ny famoahana ny kinova vaovao an'ny navigateur web, "Pale Moon 31.0" izay tonga taorian'ny iray amin'ireo developer manan-danja hamantatra sy hanohitra olana maromaro ny stabilité, nofoanana ny dikan-teny niforona teo aloha avy Pale Moon 30.0.0 sy 30.0.1.
Ho an'ireo izay tsy zatra ny mpitety tranonkala dia tokony ho fantatr'izy ireo fa izany no izy fork an'ny firefox codebase hanomezana fampisehoana tsaratsara kokoa, hitahiry ny interface mahazatra, hampihena ny fanjifana ny fahatsiarovan-tena ary hanome safidy fanampiny hanamboarana azy.
Ny tetik'asa dia mifikitra amin'ny fandaminana mahazatra ny interface, tsy miova amin'ny interface Australis tafiditra ao amin'ny Firefox 29, ary miaraka amin'ny fanomezana fahafaha-manaingo manokana.
Ireo singa lavitra dia misy DRM, Social API, WebRTC, mpijery PDF, Crash Reporter, kaody hanangonana statistika, fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny ary olona manana fahasembanana. Raha ampitahaina amin'ny Firefox dia mitazona ny fanohanana ny teknolojia XUL ilay mpitety tranonkala ary mitazona ny fahaizana mampiasa lohahevitra feno sy maivana.
1 Pale Moon 31 Fampisehoana vaovao lehibe
1.1 Ahoana ny fametrahana ny tranokala Pale Moon amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Pale Moon 31 Fampisehoana vaovao lehibe
Ho an'ny ampahany amin'ny fanovana izay asongadina amin'ity dikan-teny vaovao amin'ny Pale Moon 31.0 ity dia hitantsika fa Niverina ny fampiasana sehatra UXP (Unified XUL Platform), izay mamolavola sampan'ny singa Firefox avy amin'ny tahiry Mozilla Central, tsy misy rohy mankany amin'ny Rust code ary tsy tafiditra ao anatin'izany ny fivoaran'ny tetikasa Quantum. Ny motera mpitety tranonkala ampiasaina dia Goanna 5.1, karazana motera Gecko misy kaody nesorina ho an'ny singa sy sehatra tsy tohana. Ireo mpampiasa ny sampana Pale Moon 29.x dia omena fanavaozana mivantana amin'ny version 31.0.
Ny zava-baovao iray hafa izay miavaka dia izany ny fanohanana dia omena ho an'ireo plugins taloha firefox tsy voaova ho an'ny plugins vaovao voaomana manokana ho an'ny Pale Moon. Ny plugins taloha dia tsy azo antoka fa ho stable, ka ho voamarika ao amin'ny mpitantana plugin miaraka amin'ny marika orange manokana.
Koa, kaody nesorina mifandraika amin'ny fampiasana ny serivisy Google SafeBrowsing sy URLClassifier ary namerina ny kaody mba hanangonana ny navigateur amin'ny macOS, nesorina ny API ArchiveReader tsy manara-penitra, ary nanadio ny singa Mozilla ho an'ny fanangonana telemetry.
Of the fanovana hafa miavaka amin'ity kinova vaovao ity:
Kaody nesorina mifandraika amin'ny fanohanana sehatra Android.
Nesorina ny rafitra fitiliana Marionette mandeha ho azy.
Ao amin'ny IntersectionObserver() constructor, ny fandefasana tady tsy misy na inona na inona dia miantoka fa ny fananana rootMargin dia napetraka ho default fa tsy manipy fanavahana.
Fanohanana fanampiny ho an'ny famantarana codec video VPx.
Nanamboatra olana efa hatry ny ela tamin'ny fampisehoana saha napetraka mivantana amin'ny marika vatana sy iframe nefa tsy mampiasa CSS.
Fanamboarana ported mifandraika amin'ny fanalefahana ny vulnerability.
Finalmente raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao momba an'ity kinova vaovao ity dia azonao atao ny manamarina ny pitsopitsony Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Ahoana ny fametrahana ny tranokala Pale Moon amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Ho an'ireo izay liana te-hametraka ity tranonkala ity amin'ny distro, tsy mila manokatra terminal fotsiny amin'ny rafitrao sy ny karazany izy ireo misy amin'ireto baiko manaraka ireto.
Ny navigateur dia manana tahiry ho an'ny dikan-teny Ubuntu tsirairay izay mbola tohana ankehitriny. Ary amin'ity dikan-teny vaovao amin'ny navigateur ity dia efa misy fanohanana ho an'ny Ubuntu 20.04. Tsy maintsy ampidirinao fotsiny ny tahiry ary apetraho amin'ny fanoratana ireto baiko manaraka ireto:
Ankehitriny mpampiasa izay ao amin'ny kinova Ubuntu 18.04 LTS ataovy izao manaraka izao:
Na iza izy ireo Mpampiasa Ubuntu 16.04 LTS izy ireo no hampandeha ireto baiko manaraka ireto ao amin'ny terminal:
Raha ho an'ireo izay mpampiasa Ubuntu 21.04 sy 22.04 tokony ho fantatr'izy ireo fa mbola tsy vita ny fonosana deb mifanaraka amin'izany, ka afaka manara-maso izany avy amin'ity rohy ity.
Rehefa misy izy ireo dia misintona fotsiny ary mametraka izany miaraka amin'ny mpitantana ny fonosana tiany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Pale Moon 31 dia efa navoaka, fantaro ny vaovao
Docker Desktop dia azo alaina ho an'ny Linux
Ny tetikasa Gnome dia nanambara ny paikadiny amin'ity taona 2022 ity